विवादले थप चर्चा दियो - कुराकानी - साप्ताहिक
विवादले थप चर्चा दियो
नेपाली सांगीतिक आकाशमा सङ्घर्षरत थिए गायक एकदेव लिम्बू । लिम्बू भाषाको पहिलो पपगायकका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै हिट नम्बरको खोजीमा रहेका एकदेवलाई सिउँदो गीतले पर्याप्त चर्चा दियो । यस कुमारको शब्द तथा संगीतमा तयार भएको गीत सिउँदोमा कस्तो सिमाना कोरेछौ, यसअघि नै गायक बाबु बोगटीले आफ्नो एल्बममा समावेश गरेका थिए । सल्लाहबिना नै आफ्नो एल्बममा समावेश भएको गीत एकदेवलाई दिएकोमा बाबु आक्रोशित समेत भए ।
यस कुमारले पनि आफ्नो शब्द, संगीतको उक्त गीतलाई बाबुले बेवास्ता गरेका कारण नयाँ पुस्ताका एकदेवलाई गाउन दिएको प्रतिक्रिया दिएपछि गीतसँगै गायक एकदेव पनि विवादमा मुछिए । एकदेवको स्वरमा तयार गरिएको गीत सिउँदोले लाखौं भ्युज पाइसकेको छ । एकदेव पहिलो पटक विदेशको सांगीतिक कार्यक्रमका लागि हङ्कङ पुगेका बेला सोधिएका पाँच प्रश्न :
सिउँदो गीतको चर्चाले नै पहिलो विदेशयात्रा तय गरेको हो ?
हो, केही भूमिका अवश्य छ । सबैले मेरो स्वर, यसकुमार दाइको शब्द तथा कम्पोजमा तयार सिउँदो गीतलाई मन पराउनुभयो । हङकङमा पनि गीतको प्रभाव राम्रै पाएँ । सबैले स्यावासी दिनुभयो ।
विवादले आलोचना होइन चर्चा कमाउनुभयो होइन ?
वास्तवमा यो गीत किन विवादित भयो, म छक्क पर्छु । यसकुमार दाइले सिउँदो गीत बाबु दाइलाई दिँदा पनि कुनै स्वार्थबिना दिनुभएको थियो, मलाई पनि प्रयास गर न त भनेर दिनुभएको हो । उहाँहरू मिल्ने साथी पनि हो । हामीले गीत विवादित भएपछि यो गीतको पुरानो भर्सनमा बाबु बोगटीले स्वर दिनुभएको छ भनेर उहाँको नाम पनि हालिसकेका छौं तर जे जस्तो भए पनि उहाँहरू दुवै जना मेरा अग्रज हुनुहुन्छ । मलाई अझ फक्रने मौका दिनुभयो धन्यवाद ।
तपाईंको सांगीतिक यात्रामा सिउँदो गीत टर्निङ प्वाइन्ट नै हो– होइन ?
हो, म एउटा हिट गीतको खोजीमा थिए । पप संगीतमा आफूलाई अभ्यस्त बनाइ रहँदा यो मेलोडियस धारको गीतले मलाई भर्सटायल गायकको परिचय दिएको छ । जहाँ गए पनि सिउँदो गीत गाउन अनुरोध र सकारात्मक कमेन्टस् पाउँदा यो गीत मेरो सांगीतिक यात्राको एउटा टर्निङ प्वाइन्ट नै सावित भएको छ ।
कसरी लिम्बू गीतलाई पप शैलीमा ढालेर पहिलो लिम्बू पपगायक बन्नुभयो ?
म आफ्नो भाषा, संस्कृतिलाई अति नै माया गर्छु । लिम्बू भाषा तथा लिम्बू गीतलाई अहिलेको नयाँ पुस्ताले पनि अङ्गिकार गरुन र यसलाई फरक धारमा पनि सुनियोस भनेर मैले लिम्बू गीतलाई पप शैलीमा गाउने प्रयास गरेको हुँ । हाम्रो आफ्नोपन त छँदैछ तर यो शैलीलाई पनि धेरैले मन पराउनु भएको छ, खुसी छु ।
अब के गर्दै हुनुहुन्छ ?
भर्खरै कञ्चनजंगा सांस्कृतिक साँझमा सांगीतिक प्रस्तुतिका लागि हङकङ पुगेर आए । देशभित्रका कार्यक्रमहरूमा पनि सबैको माया पाइरहेको छु । सिउँदो गीतले पाएको सफलता र प्रोत्साहनबाट गीतको भिडियो निर्माण गर्नैपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ, अरू नयाँ गीतसँगै उक्त गीतको भिडियोको पनि तयारी गरिरहेको छु ।
प्रकाशित :वैशाख १०, २०७५
चुलिँदैछ भीपीएनको चर्चा
अब छोरीको चर्चा
कोर्सका पुस्तकभन्दा दर्शन र धर्मका पुस्तक पढ्छु माघ ४, २०७५
सक्किगो नि ! माघ २, २०७५
विवाह र प्रेम फेक कमिटमेन्ट पुस २३, २०७५
अनलाइनहरूको फेक न्युजको सिकार भएँ पुस ५, २०७५
बाह्र वर्षपछि खोलो त फर्किन्छ मंसिर १६, २०७५
ट्याक्सीभन्दा सस्तो टुटल मंसिर १०, २०७५
प्रोफेसनल जुवाडे मोबाइल शैलीमा खेल्छन कार्तिक १९, २०७५
मायाले संसारलाई धैर्य गर्ने पाठ सिकाउँछ कार्तिक १३, २०७५
रक्सी पिएका बेला घर पस्दिनँ आश्विन ३०, २०७५
रिल्याक्सका लागि पिउँछु आश्विन २९, २०७५